Wararka Maanta: Arbaco, Mar 21, 2018-Sarkaal Maxamed Nuur oo loo xiray dilka Justine Daimond oo u dhalatay Australia
Arbaco, Maarso, 21, 2018 (HOL) –Sarkaal Maxamed Nuur oo ka tirsan Booliiska magaalada Minneapolis ayaa Talaadadii shalay loo xirey in uu ula kac u dilay Justine Damond oo aheyd Haweeney u dhalatay dalka Australia, nin ay saaxiibo ahaayeena kula nooleyd Magaalada Minneapolis.
Sarkaalkan Soomaaliga ah ayaa toogasho ku dilay haweenaydan 15-kii July sanadkii hore 2017-kii, xilligaasi wixii ka dambeeyay waxaa socday Dacwadaha la xiriira falkan.
Xeer Ilaaliyaha degmada ay ku taallo magaalada Minneapolis oo warbaahinta la hadlay ayaa soo bandhigay eedeymo rasmi ah oo uu u jeediyay Maxamed Nuur, oo kala ah dilalka Darajada Saddexaad iyo darajada Labaad, oo hadii lagu helo sarkaalkan ay ka dhalan karto keeni karto xabsi aad u dheer.
Qarreennada u doodaya Maxamed Nuur ayaa aad u beeniyay arrintan, waxayna ku doodayaan in Xeer ilaaliyaha waxyaabaha uu sheegay aanay waxba ka jirin, oo ay yihiin kuwa la isku soo dhoobay.
Soomaalida dalkaasi Mareykanka ayaa siweyn u hadal haya xariga Maxamed Nuur waxayna dalbanayaan in sida saxda ah cadaalad loogu raadiyo sarkaalkan, oo aanay dhicin eexasho.